Rajadii da’yarta ee doorashada deegaanku way beenowday | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Rajadii da’yarta ee doorashada deegaanku way beenowday
Rajadii da’yarta ee doorashada deegaanku way beenowday
Doorashada soo socota ee maanta Golaha Guurtida aan weligood la dooran u asteeyeen inay dhacdo dhamaadka bisha shanaad ee sanadkan (May 31), waxay noqon doontaa tijaabada dhalinyarada Soomaliland, sababta oo ah doorkan rag iyo dumar badan oo la tuhmi jiray baa ordaaya.
Doorashadii Golaha Wakiilada 2005 tii iyo iminka farqigaas dhalinta yar baa u dhexeeya, laakiin doorashadii golaha deegaanka ee 2012 iyo tan 2021 ee deeganka farqi uma dhexeeyo oo taas horeba dhalinyaro badan baa galay kuna guulaystay, laakiin waxba may soo kordhin. Sidaas awgeed golayaasha deegaanka rajadii laga qabay da’ yartu way beenowday, laakiin doorashadan wakiiladu waxay noqon doontaa tijaabadii ugu dambaysay ee dhalinyarada Soomaaliland. Ama waxaynu noqon doonnaa kuwo wax beddela oo lagu nasto ama iska hadlayaan marfashyada, kulamada iyo baraha bulshada uun ka dhurma oo aan kas iyo karaan waxbeddeli kara lahayn.
Waa halkii qaryaan Dhoodaanee:
Dhimir iyo garaad waan qabnaa, fiiro dhumuc wayn,
Oo qaarkeen murtiday soo dhuftaan, waabad dhaygagiye,
Dhabahaan marayniyo libtuna, waysu dhawdahaye,
Is xilqaanka noo dhiman, maxaan uga dhabcaalownay?
Alla waan ilaaway ee bushaaraan idiin hayaa! Dee bishan shanaad (MAY) ee la qorsheeyay inay dhacdo doorashadu, waa bil u amran Soomaaliland. Waa bishii Soomaalilandta soddon jirka ah ee aafaadkii dhacay inaga badbaadisay dhisanay. Waa bisha Cigaalkii seeska u dhigay dawladnimada Boorame lagu soo doortay. Waa bishii Dastuurka oo ah heshiiska bulsheed ee aynu agaasimanno dawladnimadeenna afti ku meel marsanay. Adigu waa bil inoo amran, oo doorkan xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo Wakiilada ee aynu doorranaa waxay noqon doonnaan kuwo inoo keena is beddelka qarankeennu u baahan yahay.
Maxamed Saleebaan Yasiin
Rajadii da'yarta ee doorashada deegaanku way beenowday
Previous articleWiil Somali ah oo lagu dilay dalka Canada
Next articleKulanka Madaxweynaha Somaliland iyo Swan